အရှယျရောကျလာပီဖွဈတဲ့ တဈဦးတညျးသော သားခြောလေး အကွောငျးတှေ ပွောပွလာတဲ့ ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျ – Shwe Likes
အရှယျရောကျလာပီဖွဈတဲ့ တဈဦးတညျးသော သားခြောလေး အကွောငျးတှေ ပွောပွလာတဲ့ ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျ
Shwe | June 21, 2022 | Celebrity | No Comments
ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျ ဆိုတာနဲ့ပရိသတျတှေ ခဈြရတဲ့နိုငျ ငံကြျောအနုပညာ ရှငျတဈ ယောကျပါ။ ရုပျရှငျလောကမှာရော အဆိုတျောလောကမှာပါ အောငျမွငျမှု တှရေရှိခဲ့တာပါ။ ဒါကွောငျ့လ ညျးယနထေိ့အော ငျမွငျမှုတှမြေားစှာ နဲ့ပရိသတျတှအေားပေးနေ ရတာပါ။သူမ ဟာအခုမှာတော့ခဈြစရာကော ငျးတဲ့သားလေးနဲ့အတူ ပြျောရှငျစ အခြိနျလေး တှဖွေတျသနျးနတောပါ။
သားလေးကလညျး အရှယျရောကျလာခြိနျဖွဈတာကွောငျ့ သားနဲ့အမကွေား မှာရှိတဲ့ခံစားခကျြလေးတှထေိနျး ကွောငျးမှုလေးတှကေိုခုလိုပွောပွ ခဲ့တာပါ။ သား နဲ့ ကြှနျမ ကွားမှာ ကှာဟမှုလေးတှရှေိ နပေါတယျအဖွရှောတော့ အသကျအရှယျ အတှအေ့ကွုံ မတူ ညီခွငျးက အဓိက ပါ…..
သားက ၁၆ နှဈကမြက ၅၆ နှဈလမေိဘ နရောရော ကျလာတော့ သား သမီးအပျေါသူ မှားနေ မှနျနတောလေးတှေ အတှကျ စကားစမွညျ မကွာခဏပွောဖွ ဈရပါတယျ။သားလကျခံ အဆငျ ပွတောရှိသလိုသားနားလညျနိုငျစှမျးမရှိပဲ ငွငျးပယျခံရတာလညျး ရှိပါတယျ…သားတို့သငျကွား မှုအတှအေ့ကွုံအရယု တ်တိမတနျရငျ လကျခံလမေ့ ရှိပါဘူးသားက နူးညံ့ပြော့ပြောငျး ပမေယျ့သူလကျမခံနို ငျတဲ့ကိစ်စအတှကျ အလှနျခေါငျးမာပါ တယျကမြက ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ ကမြ တတျစှမျးသလောကျလေးသားကို သငျကွားလရှေိ့ပါတယျ
သားကငယျငယျ ကလိုမိဘ ပွောသမြှ မကျြလုံးအဝိုငျးသားနဲ့ နားထောငျလေ့ မရှိတော့ပဲသူ သငျကွားသိမွငျသမြှနဲ့ ကမြ ကိုပွနျမေးခှနျး ထုတျလရှေိ့တယျ သူ့စိတျ ဝငျစားမှုအတှကျ ကမြ ကနြေပျရပါတ ယျတခါတရံလ ညျးသူ့ဆန်ဒနဲ့ ဆနျ့ကငျြတဲ့ ကမြရဲ့ ဆုံးမစကားတ ခြို့အပျေါရနျလိုတာ မြိုးအထိ ကွုံရတတျပါတယျ.( သူ ခံစားနရေတာ လေးကို ထညျ့တှကျ ပေးဖိုလိုတယျ လို့ ကမြ သငျကွား မိပါတယျ )။
ကမြတှေးတယျ ကမြနဲ့သား အကွား ကှာဟမှုက အသိအမွငျ level မတူကွဘူး level တူတဲ့ ကိစ်စလေးတှမှောလညျးခံစားမှု degree မတူကွပွနျ ဘူးလကျခံပါ တယျလေ အခွခေံအကွော ငျးတရားတှမှေ မတူကွတာကိုးသ ဘာဝလက်ခဏာ နဲ့ သာမညလက်ခဏာ အဖွဈ ကမြတို့ ကှဲလှဲနကွေပါတယျ။
သဘာဝလက်ခဏာ ဆို တာရုပျနာမျတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျလက်ခ ဏာမြိုးပါဥပမာအမြိုး သမီးနဲ့အ မြိုးသား ဆိုပါတော့။အမြိုးသမီးတှရေဲ့ သဘာဝလ က်ခဏာအားဖွငျ့လှခြ ငျတယျစိတျနုတ ယျ၊ခကျြပွု တျခငျြတယျအားငယျတတျတယျမြ ကျရညျကလြှယျတယျ စသဖွငျ့ အမြိုးသမီးတို့ရဲ့ ပငျကိုယျ သဘာဝတှဟောအမြိုးသမီးတို့ရဲ့ သဘာဝ လက်ခဏာတှေ ပါပဲအမြိုးသား တှကေတော့အကွမျးခံတ ယျ ခှနျအားကွီးတယျရှာဖှကြှေေး မှေးလိုတယျရငျဆိုငျဖွေ ရှငျးလိုတယျ စသဖွငျ့ အမြိုးသားတို့ရဲ့ အခွခေံသဘောသတ်တိတှဟောလညျး အမြိုးသား တို့ရဲ့သဘာဝလ က်ခဏာတှဖွေဈပါတယျ.
သာမညလ က်ခဏာဆိုတာကတော့အမြိုးသမီးဖွဈစအေမြိုး သားဖွဈစေ အရာရာမမွဲခွငျးအားဖွငျ့ ခရီးဆကျနကွေရတယျဆိုတဲ့ ဘုံတူညီတဲ့ သဘောလက်ခဏာဖွဈ ပါတယျ.သားမှာ သားအသကျအရှယျအရ လိုခငျြတဲ့ အဝတျအစား အသုံးအဆောငျသှားခငျြတဲ့နရော လုပျခငျြတဲ့ကိ စ်စသူ့အရှယျအရ ရငျဆိုငျနရေတဲ့စိမျချေါမှုသူလု ပျရမယျ့အလုပျ လေးတှရေဲ့ဖိ အားစသညျဖွငျ့ သားရဲ့ပတျဝနျးကငျြ က သားအတှကျ အကွီးကွီးဖွဈ နတေယျ.ကမြလညျး ကမြအရှယျနဲ့ လိုကျရောညီထှတေဲ့ ဖိအားမြိုးစုံရှိပါတယျသို့သျော ကမြက မမွဲတဲ့သဘာဝကို နှလုံးသှငျးနိုငျတဲ့ အရှယျမို့သားလို အကွီးကွီး ဖွဈမနပေါဘူး.
သားက သဘာဝလက်ခဏာ တှမှောရှာလညျရငျး သငျယူနရေတဲ့အရှယျကမြ က သာမညလက်ခဏာနဲ့သားဖွဈနတောကို မွငျနိုငျတဲ့ အရှယျပေါ့အခြိနျဆိုတာ အဖွတှေအေမြားကွီး ထုတျ ပေးနိုငျပါတယျအဲ့ဒီအဖွတှေထေဲမှာသားဇော ကပျနတေဲ့ ကမြစိတျတှကေို မမွဲကွောငျးဆငျခွငျရငျး သားလေးကို ကွီးပငျြးဖို့ အခြိနျပေးရမယျ ဆိုတဲ့ အဖွလေ ညျးပါဝငျပါတယျ…..မိသားစုတိုငျး ပြျောရှငျအောငျမွငျနိုငျကွပါစဆေိုပွီးပွောပွခဲ့တာပါ။ Credit;
ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်တွေ ချစ်ရတဲ့နိုင် ငံကျော်အနုပညာ ရှင်တစ် ယောက်ပါ။ ရုပ်ရှင်လောကမှာရော အဆိုတော်လောကမှာပါ အောင်မြင်မှု တွေရရှိခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်လ ည်းယနေ့ထိအော င်မြင်မှုတွေများစွာ နဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးနေ ရတာပါ။သူမ ဟာအခုမှာတော့ချစ်စရာကော င်းတဲ့သားလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စ အချိန်လေး တွေဖြတ်သန်းနေတာပါ။
သားလေးကလည်း အရွယ်ရောက်လာချိန်ဖြစ်တာကြောင့် သားနဲ့အမေကြား မှာရှိတဲ့ခံစားချက်လေးတွေထိန်း ကြောင်းမှုလေးတွေကိုခုလိုပြောပြ ခဲ့တာပါ။ သား နဲ့ ကျွန်မ ကြားမှာ ကွာဟမှုလေးတွေရှိ နေပါတယ်အဖြေရှာတော့ အသက်အရွယ် အတွေ့အကြုံ မတူ ညီခြင်းက အဓိက ပါ…..
သားက ၁၆ နှစ်ကျမက ၅၆ နှစ်လေမိဘ နေရာရော က်လာတော့ သား သမီးအပေါ်သူ မှားနေ မှန်နေတာလေးတွေ အတွက် စကားစမြည် မကြာခဏပြောဖြ စ်ရပါတယ်။သားလက်ခံ အဆင် ပြေတာရှိသလိုသားနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိပဲ ငြင်းပယ်ခံရတာလည်း ရှိပါတယ်…သားတို့သင်ကြား မှုအတွေ့အကြုံအရယု တ္တိမတန်ရင် လက်ခံလေ့မ ရှိပါဘူးသားက နူးညံ့ပျော့ပျောင်း ပေမယ့်သူလက်မခံနို င်တဲ့ကိစ္စအတွက် အလွန်ခေါင်းမာပါ တယ်ကျမက ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ ကျမ တတ်စွမ်းသလောက်လေးသားကို သင်ကြားလေ့ရှိပါတယ်
သားကငယ်ငယ် ကလိုမိဘ ပြောသမျှ မျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ နားထောင်လေ့ မရှိတော့ပဲသူ သင်ကြားသိမြင်သမျှနဲ့ ကျမ ကိုပြန်မေးခွန်း ထုတ်လေ့ရှိတယ် သူ့စိတ် ဝင်စားမှုအတွက် ကျမ ကျေနပ်ရပါတ ယ်တခါတရံလ ည်းသူ့ဆန္ဒနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ ကျမရဲ့ ဆုံးမစကားတ ချို့အပေါ်ရန်လိုတာ မျိုးအထိ ကြုံရတတ်ပါတယ်.( သူ ခံစားနေရတာ လေးကို ထည့်တွက် ပေးဖိုလိုတယ် လို့ ကျမ သင်ကြား မိပါတယ် )။
ကျမတွေးတယ် ကျမနဲ့သား အကြား ကွာဟမှုက အသိအမြင် level မတူကြဘူး level တူတဲ့ ကိစ္စလေးတွေမှာလည်းခံစားမှု degree မတူကြပြန် ဘူးလက်ခံပါ တယ်လေ အခြေခံအကြော င်းတရားတွေမှ မတူကြတာကိုးသ ဘာဝလက္ခဏာ နဲ့ သာမညလက္ခဏာ အဖြစ် ကျမတို့ ကွဲလွဲနေကြပါတယ်။
သဘာဝလက္ခဏာ ဆို တာရုပ်နာမ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လက္ခ ဏာမျိုးပါဥပမာအမျိုး သမီးနဲ့အ မျိုးသား ဆိုပါတော့။အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သဘာဝလ က္ခဏာအားဖြင့်လှချ င်တယ်စိတ်နုတ ယ်၊ချက်ပြု တ်ချင်တယ်အားငယ်တတ်တယ်မျ က်ရည်ကျလွယ်တယ် စသဖြင့် အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ် သဘာဝတွေဟာအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ သဘာဝ လက္ခဏာတွေ ပါပဲအမျိုးသား တွေကတော့အကြမ်းခံတ ယ် ခွန်အားကြီးတယ်ရှာဖွေကျွေး မွေးလိုတယ်ရင်ဆိုင်ဖြေ ရှင်းလိုတယ် စသဖြင့် အမျိုးသားတို့ရဲ့ အခြေခံသဘောသတ္တိတွေဟာလည်း အမျိုးသား တို့ရဲ့သဘာဝလ က္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်.
သာမညလ က္ခဏာဆိုတာကတော့အမျိုးသမီးဖြစ်စေအမျိုး သားဖြစ်စေ အရာရာမမြဲခြင်းအားဖြင့် ခရီးဆက်နေကြရတယ်ဆိုတဲ့ ဘုံတူညီတဲ့ သဘောလက္ခဏာဖြစ် ပါတယ်.သားမှာ သားအသက်အရွယ်အရ လိုချင်တဲ့ အဝတ်အစား အသုံးအဆောင်သွားချင်တဲ့နေရာ လုပ်ချင်တဲ့ကိ စ္စသူ့အရွယ်အရ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိမ်ခေါ်မှုသူလု ပ်ရမယ့်အလုပ် လေးတွေရဲ့ဖိ အားစသည်ဖြင့် သားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် က သားအတွက် အကြီးကြီးဖြစ် နေတယ်.ကျမလည်း ကျမအရွယ်နဲ့ လိုက်ရောညီထွေတဲ့ ဖိအားမျိုးစုံရှိပါတယ်သို့သော် ကျမက မမြဲတဲ့သဘာဝကို နှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့ အရွယ်မို့သားလို အကြီးကြီး ဖြစ်မနေပါဘူး.
သားက သဘာဝလက္ခဏာ တွေမှာရွာလည်ရင်း သင်ယူနေရတဲ့အရွယ်ကျမ က သာမညလက္ခဏာနဲ့သားဖြစ်နေတာကို မြင်နိုင်တဲ့ အရွယ်ပေါ့အချိန်ဆိုတာ အဖြေတွေအများကြီး ထုတ် ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေတွေထဲမှာသားဇော ကပ်နေတဲ့ ကျမစိတ်တွေကို မမြဲကြောင်းဆင်ခြင်ရင်း သားလေးကို ကြီးပျင်းဖို့ အချိန်ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ အဖြေလ ည်းပါဝင်ပါတယ်…..မိသားစုတိုင်း ပျော်ရွှင်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေဆိုပြီးပြောပြခဲ့တာပါ။ Credit;
အရာရာ ရှားပါးတဲ့ လှတျမွောကျနယျမွတေဈနရောက ရယျစရာအဖွဈအပကျြလေး တဈခုအကွောငျးကိုပွနျပွောပွခဲ့တဲ့ ထားထကျထကျ
သှယျလြှလှပလှနျးနတေဲ့ သူမရဲ့ ခန်တာကိုယျအလှတှေ ကို ထုတျဖျောပွသလာတဲ့ မမေေ ပိုးအိအိခနျ့